MIYUU ISKU-DHAFAN YAHAY MURAAYADO KALA DUWAN? MAXAY DHIRTU U EGTAHAY SAWIRKA, IYO SIDEE AYAY U KALA DUWAN YIHIIN, IYO ASTAAMAHA QAABKA UU IMERETI KALA DUWAN YAHAY? - SOOSAARKA DALAGGA
Su'aal faahfaahsan oo su'aasha ah: isku-dhafka iyo marigolds - ma yihiin ubaxyo kala duwan?
Marigold iyo saffron - ubaxyo laga heli karo inta badan xagaaga xagaaga.
In kasta oo xaqiiqda ah in dabiiciga ah dhirta ay gebi ahaanba ka duwan, bannaanka u badan inta badan ku wareersan yihiin.
Maxay kala duwan yihiin iyo sidee bay isku mid yihiin? Maxay tahay sababta jahwareer joogta ah u dhexeeya midabadaas?
Tilmaanta isbarbardhigga iyo sawirka
Kuwa beeraha ubaxa waxaa ku jira muran ka badan xaqiiqda ah in marigolds ay tahay amaanka taas oo ah mid la heli karo, laakiin u dhigma muuqaalka iyo guryaha, saffron. Labada dhirtaas ayaa si weyn loo isticmaalaa karinta, daawada iyo kiknoolajiyada (ka aqriso isticmaalka marigolds ee daawada dadweynaha iyo karinta, waxaanan ka hadalnay sifooyinka daawooyinka iyo khilaafaadka si loo isticmaalo ubaxkan ku jira qalabkaan). Laakiin waqti isku mid ah marigolds iyo saffron lama xiriirin, laakiin ubaxyo kala duwan, laakiin waxay leeyihiin sifooyin isku mid ah. Fiiri farqiga ayaa caawin doona sharaxaadda isbarbardhigga.
In ka badan 50 nooc oo marigold waxay ku koraan Koonfurta Ameerika ama Kariibiyaanka. Faraqa ugu weyn ee u dhexeeya noocyadan dhirta waxaa lagu go'aamiyaa qaabka tufaaxa iyo inflorescences. Akhri alaabtayada ku saabsan sida loo koro oo loo daryeelo ubaxyada dilka ah ee bannaanka u furan iyo gurigaba dheriyada.
Dhirta qoyska Astrov
Marigolds waxay ka tirsan yihiin reerka Astrov, waa dhaqan sanadle ah. Aad dhif u tahay noocyada dilka ah ee ubaxyadaas. Dadka dhexdiisa, marigolds ayaa si fiican loo yaqaan 'Chernobrids'.
Hayso foomka baadiyaha, cabbirka yar.
Qalabka warshadu waa mid kacsan, oo la jarjaray.
Florescences qaabka dambiilaha.
Ubaxyada waa dhalaalaya, badanaaba huruud ah iyo orange, hareeraha geesaha.
Miraha marigolds waa achenes black madow.
Marigold - warshad iftiin leh oo jecel kulaylka iyo qoyaanka. Waqtiga ubaxu wuxuu bilaabmaa guga dambe wuxuuna sii soconayaa ilaa dayrta (eeg sida ubaxu u egyahay sawirka, iyo sidoo kale inuu ogaado sababta aysan u doonaynin in la gooyo burooyinkeeda halkan, iyo maqaalkani wuxuu ka akhriyaa ku saabsan quudinta marigolds ee ubax badan).
Caawimaad! Marigolds ayaa lagu hodansiiyay fitamiinada, tani waxay sharraxaysaa sumcaddooda berrinka daawada iyo farmasiyada. Waxay ka koobanyihiin phytoncides, ascorbic acid, flavonoids, walxaha raadraaca (magnesium, birta, potassium, copper), fitamiinada iyo wax ka badan.
Meelaha banaanbaxa ayaa sidoo kale faa'iido leh: waxaa loo isticmaalaa sidii sunta cayayaanka dabiiciga ah. Ubaxyada ayaa cabsi iyo dhirta ka ilaaliya nematodes, weevil, duqsifta basasha, gooyn, aphids, quraanjo. Taasi waa sababta Fiisooyinka ay ku talinayaan beerashada marigolds sariiraha khudradda, oo ay weheliso wareega sariiraha ama qaabka jasiiradaha yaryar.
Baro wax badan oo ku saabsan midabadan muuqaalkan ah:
Ubaxa ka soo jeeda Iris
Saffron waa geedka dilka ah ee qoyska Iris. Qaybaha ka soo baxa sharaxaadda botanical:
Waxay leeyihiin digriiga qaabka nalalka.
Waxay ku koraan dherer yar - ilaa 25-30 cm.
Stem ma laha.
Leaves waa qadar asal ah, midab keli.
Miraha - sanduuqyada yar yar.
Xilliga ubax ee saffron 2 waa dayrta iyo gu'ga (iyada oo ku xidhan noocyada gaarka ah).
Stigmas ubaxa waxay u egyihiin sida tuubbooyinka aan ka dheereyn 4 mm oo dherer ah, kuwaas oo leh caraf udgoon, macaan. Waxaa jira 3 tufaax oo noocyo ah oo ubax ah, kuwaas oo ka mid ah kuwan, dhirta caanka ah ee caanka ah ayaa la sameeyaa. Wixii diyaarinta, tubooyinka si taxadar leh u kala soocaan ubaxa, qalajiyey iyo dhulka. Waxaad ku dhigi kartaa daawadan muddo 2 sano ah.
Caawimaad! Saffron waa mid ka mid ah dhirta ugu qaalisan adduunka. Qiimaha 1 kg waxay gaareysaa 5000 oo doolar.
Cinjirku waa mid aad u sarreeya, wuxuuna ka kooban yahay fitamiin badan iyo macdan (thiamine, saliida dufanka leh, walxaha nitrogenous, lycopene iyo kuwa kale). Ubaxa sidoo kale wuxuu bogsiinayay sifooyinka waxaana loo isticmaalaa daawada..
Warshadu waxay leedahay saameyn anticonvulsant iyo anti-bararka, waxay yareysaa kolestaroolka. Crocetin acid, oo ku jirta cagaarka, ma aha oo kaliya ka hortagga koritaanka burooyinka kansarka, laakiin sidoo kale waxay burburiyaan unugyada asaasiga ah. Dhanka kale, ubaxa waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo gubashada iyo cudurrada maqaarka.
Waa maxay faraqa?
Sifooyinka isbarbar dhiga ee dhirta.
Muujinaya Marigolds Saffron
Qoyska Astro Iris
Gawaarida Diirsan, toosan Maqnaansho
Root Dalloobin, waxaa jira geeddi-socodka horumarinta In qaabka basasha
Hooyo America Hindiya, Bariga Dhexe
Saameyn ku yeelashada jirka (waa labalaab iyo isbarbardhig labadaba). Dheefta xubnaha jirka iyo nidaamyada. Dib-u-cusbooneysiinta iyo guud ahaan bogsashada.
Isticmaal karinta cuntada Gali kharashyada dhirta. Khamriga ugu qaalisan. Waxaa si xun loola macaamilaa dhir kale.
Imereti kala duwan
Magaca kale waa Zafaran. Waxay ku xirantahay qoyska Astrovye. Warshad Cagaaran oo sanadle ah. Sida laga soo xigtay sharraxaadaha dhirta, Imereti sacre waa mid la mid ah marigolds.:
Isticmaalaan, ilaa 50 cm sare.
Wuxuu u dhexeeyaa ilaa 11 cm oo dheer, oo si tartiib tartiib ah u lumay.
Inflorescences ayaa ka muuqda bartamaha xagaaga.
Bixinta sidoo kale waxaa laga samayn karaa Imereti saffron. Laakiin waxay ka duwanaanaysaa saffron jooga ee dhadhanka, carafka iyo qiimaha (badanaa ka raqiisan).
Waa muhiim! Qodobbada waxtarka leh ee Saerreer Imereti waxay si aad ah uga xun yihiin xaadirka.
Sababta keenta jahwareer
Bannaanka u badan ayaa aaminsan in marigold iyo saffron ay yihiin hal iyo mid isku mid ah, laakiin fekerkan waa khalad, tan iyo ubaxyadaasi gebi ahaanba way ka duwan yihiin, inkasta oo ay u muuqdaan kuwo la mid ah midba midka kale. Waa maxay sababta marigolds iyo sacfraan marar badan ay wareeraan? Waxaa jira dhowr sababood oo jahwareer.:
Isbarbardhig muuqaalka midabka iyo dhadhanka.
Guryaha waxtarka leh. Marigold iyo saffron labaduba waxay si siman uga faa'iidaystaan ​​daawaynta habka dareemayaasha bini-aadanka, cudurada caloosha, iyo hagaajinta nidaamka dareemayaasha. Intaa waxaa dheer, dhirta labada waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo caabuqyada bakteeriyada iyo geedi socodka bararka.
Marka, farqiga ugu weyn ee u dhexeeya marigolds iyo saffron waxay ka tirsan yihiin qoysas kala duwan. Waxay ka kooban yihiin fitamiino iyo walxo raadraac ah kuwaas oo ku shaqeeya xubnaha kala duwan ee jirka bini'aadamka. Jahwareerku wuxuu soo baxaa sababtoo ah isku midka ah dhadhanka iyo midabka dhirta.